ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကနေသင်ခန်းစာတွေ: တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်ခြင်း – Masso Myanmar
လူအားလုံးတို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဖြတ်ပြီး, ကြီးကြီးနှင့်အသေးစားကုမ္ပဏီများသည်ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိသတ်တွေသို့အသာပုတ်ပါရှာဖွေနေပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောတရုတ်, အိန္ဒိယ, ဘရာဇီးနှင့်မက္ကဆီကိုအဖြစ်ထွန်းသစ်စစျေးကွက်က Facebook CEO ဖြစ်သူ Mark Zuckerberg ဟာမကြာသေးမီကအဘိဓါန် Mandarin- ဖြင့်စကားပြောတရုတ်ပရိသတ်တွေ wooed ဒါကြောင့်တကမ္ဘာလုံး-ဤမျှလောက်တိုးချဲ့ဖို့အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အကျိုးအမြတ်အခွင့်အလမ်းကိုဆက်ကပ်။ ပို. ပို. ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ကစားကွင်းအဖြစ်ကမ္ဘာကမြင်သည်အတိုင်း, border ဖြတ်ပြီးဘာသာတစ်ခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်ကိုအမှတ်တံဆိပ်မန်နေဂျာတစ်ဦးပိုကြီးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာသည်။ အောင်မြင်မှုရရန်, စျေးကွက်တစ်ခုအမှတ်တံဆိပ်တိုင်းပြည်ကနေတိုင်းပြည်အတွက်တူညီတဲ့လမ်းစ, ရသေးဒေသခံယဉ်ကျေးမှုကူးပြောင်းကြောင်းသေချာစေရန်ဤကဲ့သို့သောစီးပွားရေး, နိုင်ငံရေး, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးဒိုင်းနမစ်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားမှုများစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားရပေမည်။ အောင်မြင်သောအမှတ်တံဆိပ်ပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်။ ပြည်တွင်းဖြစ်ထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီများ, ဒေသခံပြည်သူများ employ အပေါင်းတို့နှင့်စျေးကွက်များတွင်ဒေသခံပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရာတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံထိပ်ပေါ်မှာမှထွက်လာသောအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ အောက်တွင်အောင်မြင်စွာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းလက်ခံအားဖြင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကြည့်ကြပြီအမှတ်တံဆိပ်အနည်းငယ်ကိုနမူနာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေကိုပေါ်သို့ကိုင်ထားစဉ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့အောက်ပါအမှတ်တံဆိပ်ကိုအောင်မြင်စွာဒေသသုံးအဖြစ်ပြန်ဆိုခဲ့ကြသည်။
Wal-Mart ပိုက်ဆံချွေတာခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အသကျရှငျကိုဆိုလိုတာပါ။ အမေရိကန်ကကြီးမားသော-box ကိုလက်လီအရောင်းဆိုင်ဖွင့်ပေမယ့်တစ်ကမ္ဘာလုံးတိုးချဲ့အဖြစ်ကဒေသခံစီးပွားရေးနှင့်ဥပဒေများ navigate ကူညီဖို့ရန်၎င်း၏စတိုးဆိုင်အတွင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချဉ်းကပ်မှုအဆင်ပြေအောင်။ ဥပမာအားဖြင့်, မက္ကစီကို, Wal-Mart က၎င်း၏အကြီးမားဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုကပိုတိုင်းပြည်အတွင်းကုန်စုံရောင်းအား၏ထက်ဝက်ထက်များအတွက်အကောင့်သောလမ်းစျေးသည်, ရိုးရာစျေးကွက်များနှင့်အသေးစားစတိုးဆိုင်များဖြစ်ကြောင်း။ အသိအမှတ်ပြု ထို့အပြင်ခုနှစ်, စူပါမားကက်, မဖော်ပြထားခြင်းကြီးတွေ-box ကိုစတိုးဆိုင်များများအတွက်အာကာသ, စားသုံးသူမိသားစုပိုင်စတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်စျေးကွက်များတွင်စျေးဝယ်လေ့ရှိရာမက္ကစီကိုရဲ့သိပ်သည်းမြို့ရွာနှင့်မြို့ကြီးများအတွက်အားဖြင့်လာရန်ခဲယဉ်းသည်။ မက္ကစီကိုများအတွက် Wal-Mart ရဲ့ဖြေရှင်းချက် Bodega Aurrera Express ကိုဟုခေါ်သည့် Mini-ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာတော့အခြားတစ်ဖက်တွင်ကြောင့်ဒေသခံဥပဒေများ, နိုင်ငံခြားလက်လီအရောင်းဆိုင်များဒေသခံအသေးစားနှင့်အလတ်စားကုမ္ပဏီများသည်ကနေထုတ်လုပ်သောကုန်ပစ္စည်းများ၏ 30% ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အရင်းအမြစ်ကိုတည်ဆောက်အပေါ်၎င်းတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ထက်ဝက်ဖြုန်းဖို့ရှိသည်။ ဤအများနှင့်အခြားစိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းရန် Wal-Mart တစ်ဦးရွဲအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်စားသုံးသူများထံသို့တိုက်ရိုက်ရောင်းချမထားဘူး။
အဘယ်သို့ငါ Starbucks ကအကြောင်းကိုကိုချစ်ကိုက်ညီမှု-သိ. ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာသွားနှင့်ငါမျှော်လင့်လာကြပြီတဲ့အရသာနဲ့ Latt တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိ၏တူညီသောအတွေ့အကြုံရှိသည်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါကအကြီးအအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Starbucks ကတကမ္ဘာလုံးတူညီသောပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများနှင့်ကိုက်ညီကွပ်မျက်ရာပူဇော်သက္ကာကိုပေါင်းစပ်မှတဆင့်အောင်မြင်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမမီထိန်းသိမ်းထားသည်။ Starbucks ကနှစ်သိမ့်နှင့်အတွေ့အကြုံထက်အဆင်ပြေအပေါ်ယှဉ်ပြိုင်, ကော်ဖီစျေးကွက်၏အထက်-စကေး segment ကိုအာရုံစိုက်။ ထို့အပြင်သူကကောင်းသောကော်ဖီ, အရည်အသွေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်တိုင်း store မှာသာယာသောလေထု၏တူညီသောဆော့ဝဲအစုအဝေးသငျသညျကမ်ဘာပျေါတှငျများမှာဘယ်မှာနေပါစေပေးထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကိုက်ညီမှု Starbucks က ” ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချဲ့ထွင်ဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုးချဲ့စကားပြောဆိုမှုမက်ဒေါ်နယ်ရဲ့အကြောင်းပြောနေတာမပါဘဲပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာတဝှမ်းကနိုင်ငံအများအပြားရန် “အသက်၏အမေရိကန်လမ်း” လွှဲပြောင်းခြင်းအားဖြင့်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းလမ်းကြောင်းသစ်ကိုစီးသွားခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, မက်ဒေါ်နယ်ရဲ့အသီးအသီးစျေးကွက်၏အရသာရန်၎င်း၏ menu ကိုပြုပြင်ရေးဆွဲပြီးနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီခရိုင်၏လူမှုရေးအခြေအနေတွင်မှချိန်ညှိထားသည်။ ပြင်သစ်မှာတော့သင်တစ်ဦးသည် Le Croque McDoo, လက်မှုပေါင်မုန့်ပေါ်မှာနွေးဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဒိန်ခဲသားညှပ်ပေါင်မုရနိုင်သည်။ အိန္ဒိယမှာတော့ဖောက်သည်တစ်ဦး McAloo Tikki တစ်ဦးနွေး, သက်သတ်လွတ်, အာလူး-based ဘာဂါကိုကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ မက်ဒေါ်နယ်ရဲ့လူမှုရေးစံချိန်စံညွှန်းနှုတ်ဆက်ပြီးနှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေသက်ဆိုင်ရာတည်းခိုခဲ့သည်။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးအကျိုးအမြတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာအဖြစ်မှတ်ယူသော်လည်း, နိုင်ငံခြားမြေယာနင်းနယ်အဘယ်သူမျှမလှယျကူသောလုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာအောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာတစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်သေး, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တသမတ်တည်းနှင့်တိုင်းပြည်တွင်းစျေးကွက်အတွက်လူမှုရေးအရသက်ဆိုင်ရာဖြစ်သည်၎င်း၏အမာခံမှစစ်မှန်တဲ့နေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
(Mitch Duckler ၏စီမံခန့်ခွဲမိတ်ဖက်ဖြစ်ပါသည် FullSurge, Evanston အခြေစိုက်မဟာဗျူဟာအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီတစ်ခုက)
Posted in ကုန်အမှတ်တံဆိပ်Tagged export